Hain-trano tany Masomeloka : 190 tafo kila forehitra -
AccueilSongandinaHain-trano tany Masomeloka : 190 tafo kila forehitra
Vao manomboka ny taona dia fahamaizana goavana no niseho. Ranomaso, fikorontanana ary alahelo no teny an-tavan’ny mponina nitsenana ny taona vaovao tany amin’ny fokontany Sohihy, kaomina Masomeloka, distrikan’i Mahanoro faritra Atsinanana, omaly maraina. Trano maro indray mantsy no may kila forehitra avokoa vokatry ny tandrevaka nataon’ny mpifanolo-bodirindrina. Vokany nirehitra avokoa ny trano manodidina ny 190 no ravan’ny afo.
Araka ny fitantaran’ny nanatri-maso, dia tamina trano fivarotana irony sakafo kiendiendy irony no niavin’ny afo. Ny andro rahateo moa fankalazana ny famaranana ny taona, ka efa somary mamo avokoa ny tompon’ny trano, ka tsy nitandrina. Navelan’ny tompon-trano irery tao ny afo nirehitra ka nahatonga izao firehetana goavana izao. Araka izany, nahakasika ireo trano maro teo an-tanàna izany, ka nahamay ireo trano biriky teo amin’ny manodidina, fa mora nandairany ireo trano hazo.
“Tsy hita holazaina intsony raha ny fahavoazana vokatry ny tsy fitandremana niainga tamina tokantrano iray, araka ny nambaran’ny zandarimariam-pirenena nijery mivantana ny zava-nisy”. Saika efa tsy nisy azo noraisina fa lasa lavenona avokoa ireo entana rehetra tao amin’ireo trano may ireo. Na dia izany aza, niezaka nanao izay ho afany ny mponina teo amin’ny manodidina namono ny afo, izay tamin’ny fotoana mbola tsy nahatongavan’ny mpamonjy voina. Tao no niezaka nanavotra ny ain’ireo olona. Etsy andanin’izay, tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra nandritry ny voina.
Ankoatra izay, nampahazo vahana ny afo ihany koa ny fitsokan’ny rivotra ambony dia ambony tao an-toerana. Antsasakadiny taorian’ny antso vao tonga teny an-toerana ny sampandraharaha mpamono afo, saingy tsy voafehy ny afo, raha tsy efa ora telo mahery taty aoriana, hoy ihany ny fanamafisana. Tamin’ny ora hanoratanay kosa anefa dia nilaza izy ireo fa mitohy ny famonoana sy ny fanaraha-maso afo tsy hihitatra. Nisavorovo ny mponina noho ity voina ity. Ratsy tamin’ireo mponina niharam-boina ity taona vaovao ity, satria dia maro indray no tsy hanan-kialofana.